lockdown Diary – लकडाउन डायरी | Buzzer Nepal
साँझपख, करिब ५ बजेको हुँदो हो । आकाश कालो देखिन्थ्यो । गड्गडाहाट आवाज आइरहेको थियो । पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको थियो । बाल्यकालको एक जना साथीको फोन आयो । केहि रकमको आवश्यकता परेको रहेछ । मैल केहि नसोचिकनै हुन्छ भने । यसो खल्तीहरु हेरे । मेरा खल्तीहरु नि लगभग रित्तो रहेछ । ए.टि.एम. मेसिन सम्म पुग्नु पर्ने भयो । कपडा लगाएर म तयार भए । छाता टिपे । व्याग नि भिरे । मास्क लाए । स्यानिटाइजर हातमा दले । अनि बाहिर निस्के ।
बाटोमा हिड्न पाइदै पाइदैन भन्ने पढेको थिए । समाचारहरुमा । तर पनि सहास बटुलेर हिडे । बाटोमा हिड्ने लगभग म एक्लै । अफ्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गरेकोमा । घर अगाडी सडक पेटीमा बसिरहेका मान्छेहरुलाई सोधे, “प्रहरीहरुले बाटोमा हिड्न दिन्छन् होला नि ?” उसले मलाई नहेरि जवाफ दियो, “दिन्छ होला ।” म सरासर ठमेल, ज्याथा चौकबाट कान्तिपथ तिर मोडिए ।
कान्तिपथ लगभग सुनसान थियो । एकाद मान्छे मात्र बाटोमा फाट्ट फुट्ट हिडेको देखे । सबै जना हतारमा देखिन्थे । सबैको अनुहारमा मास्क थियो । मलाइ लाग्यो, त्यो मास्क पछाडीको अनुहारहरुमा डर छ । आखाहरुमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो डर । जमल चोकबाट जब म विश्वज्योति सिनेमा हल तिर मोडिए । त्यो बाटोमा मैले आफूलाई एक्लो पाए । सिवाय सुनसान बाटो । सोचे, हजारौ मान्छेहरु हिड्ने यो बाटो । आज सुनसान छ । आज उ सोचिरहेको होला । कोहि त आएर टेकिदियोस् यो मेरो सुनसान छातीमा । सायद उ छटपटाउदी होला आफूलाई एक्लो पाएर ।
प्रहरीको भ्यान मेरो नजिकबाट सरर् जादा म दरबार मार्गको मोडमा पुगिसकेको थिए । पर सालिकको छेउमा प्रहरीहरु झुरुप्प भएर उभिएका थिए । तर नजिक पुग्दा उनीहरु सामाजिक दुरी कायम गरेको पाए । तर चुपचाप थिए । मौन थिए । मास्क लाएका थिए । मैले चुपचाप उनीहरुलाई हेरे । उनिहरुले पनि चुपचाप हेरे । दुवै तर्फबाट कुनै आवाज आएन । मलाई लाग्यो, उनीहरु डराएका थिए । मान्छेहरु सँग । धेरै प्रहरीहरु कोरोना संक्रमित भएको समाचार पढेको थिए । कुनै चिजको पनि प्रवाह नगरि नागरिकको सुरक्षामा सधै तत्परता देखाउने यि प्रहरीहरुलाई मनमनै सलाम गरे । अनि म अगाढी बढे ।
विस्तारै दरबार मार्गबाट कमलादी तिर मोडिए । अचानक एम्बुलेन्स रोएको आवाज आयो । यसो पछाडी हेरे । मै तिर आउदै थियो । म सडकबाट पेटीमा उक्ले । उ रुदै चिच्याउदै अगाडी हुइकियो । सुनसान बाटोमा एम्बुलेन्सको आवाज पनि कति भयानक सुनिन्दो रहेछ । शंख फुके जस्तो । एम्बुलेन्स भित्र मान्छेहरु थिए । सायद विरामी थियो । ए.टी.एम.मेसिनबाट केहि रकम झिके । रकम झिके पश्चात स्यानिटाइजर हातमा दले । जो आफुलाई सुरक्षित पार्नु थियो । कमल पोखरी चोक पुग्नै लागेको थिए । आकाश नराम्रो संग रोयो र आफ्ना अन्नगिन्ती आखाबाट आशुका ढिक्काहरु बर्षाउन थाल्यो । यस्तो लाग्यो, सबैका पिडाहरु पखालिन्दैछ यो नूनिलो ढिक्काहरुले ।
कृष्ण पाउरोटीको छेउ हुदै म अगाडी बढे । केहि मान्छेहरु एउटा गल्ली भित्र जम्मा भएर बसेका थिए । म जति नजिक जान्थे उनीहरुको आवाज अझ स्पष्ट हुदैथ्यो । एक जना मान्छे हात हल्लाइ हल्लाइ भन्दै थियो, “उ त्यो घरमा बस्दै आएका एउटै परिवारका १० जनालाई कोरोना संक्रमित भयो रे ।” त्यो सुनेर म त झसङ्ग भए । कारण त्यहि बाटो हुदै जानु पर्ने थियो । मनमा डर अनि उनीहरु प्रति कामना एकैचोटी आयो । मोबाइलमा घडी हेरे । साँझको ६ बजी सकेको थियो । मान्छेहरु आ–आफ्ना घर अगाडी उभिएका थिए । पानी झम झम पर्दै थियो । म एउटा छाताको भरमा हिडिरहे । सडकमा एक्लै । बिच बाटोमा स्थित भगवान गणेशजीको मन्दिरमा नमन गर्दै अगाडी बढे । सि.टी सेन्टर यसो हेरे । सुनसाथ थियो । जैन भवन अगाडी अलि धेरै नै प्रहरीहरु देखिन्थे । १२÷१५ वटा जति मोटरसाइकल र मोटर समाएका थिए । सामाजिक दुरी कायम गर्दै उनीहरु कुरा गरिरहेका थिए । सवारी धनी संग कुरा गर्न उनीहरु डराएका जस्ता देखिन्थे । त्यो समूहमा एक जनाले मात्र पि.पि.इ. लगाएको देखे । बडो सम्हालेर उनीहरु एक अर्को संग कुरा गर्दै थिए । बाटो पनि मर्मत हुदैथ्यो । एउटा ठिङ्ग उभिएको व्याक लोडर देखेर अनुमान लाए ।
ज्ञानेश्वर चोक पुग्दा लगभग अध्यारो नै भयो । पानी झम झम परिरहेको थियो । म अगाडी लम्की रहे । जुत्ता पुरै, अनि पाइन्ट भने लगभग आधाउधी भिजिसकेको थियो । कहि कहि पानी जमेर बाटो नै ढाकिएको थियो । कतै भने सानो सानो नदी जस्तै गरि पानी बग्दै थियो । रातो पुल पुग्नै लागेको थिए । एउटा औषधी पसल खुल्ला देखे । माक्स किन्ने विचार आयो । पसले सँग माक्स मागे । एउटा मात्र माक्स दिदै थियो । मैले होइन दाई, मलाई पाँच वटा दिनुहोस् भने । रु. दश गोटाले पाँच वटा सर्जिकल मास्क लिएर व्यागमा हाले । पसले दाईले पैसा लिए पछि र चानचुन फर्काए पछि पनि स्यानिटाइजर हातमा दले । मैले पनि स्यानिटाइजर दल्दै सोधे, “यता कोरोना संक्रमित कति छन्, दाई ?” उसलाई खासै बोल्न मन थिएन । मन नलागि नलागि भन्यो, “उपत्यका भरि जता ततै छ, यहाँको के कुरा गर्नु र ।” उसको उत्तर सुनेर म हिडे । मेरो छाता ओढेर । पानी सँग बच्दै म अगाडी बढे ।
पानी अझ धेरै जोड जोड सँग वर्षदै थियो । म भने अझ छिटो छिटो हिड्न थाले । गौशला चोकको उकालोबाट पानी तल झर्दा यसरी झर्दै थियो कि मानौ कतै बाट बाढी आउदै थियो । बल्ल बल्ल यो भारी वर्षालाई छिछोल्दै म साथीको कोठा सम्म पुगे । उसको कोठा पुगे पछि मात्र थाह भयो । ऊ बेरोजगारको शिकार भएको रहेछ । बडो नरमाइलो लाग्यो । साथीलाई सहयोग गर्न पाउदा खुशी नै लाग्यो । उसको उदास अनुहार देख्दा मेरो मन पनि उदास भयो । मेरो साथी त एउटा उदाहरणको पात्र मात्र हो । यस्ता कयौ मान्छेहरुको रोजगारी खोसिएको छ । विहान काम गरेर बेलुका खाने वर्गलाई झन कति समस्याहरु सताइ रहेकोे होला । उनीहरु त झन् “रोगले भन्दा नि भोकले मर्छु” भन्छन् । यो कुरा तपाई हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौ । यो वर्ष भनेको बाच्ने वर्ष हो । सबैले बाच्न पाउनु पर्छ । नाफा घाटाका कुरा अर्को वर्ष गरौला । एउटा मान्छे पनि भोकै बस्नु नपरोस् । सबैको जय होस् ।
Previous articleShortage of Water in Baglung
Next articleIsrael is expressing its grave concern over the newly elected Iranian President